Xawaaladaha Low waa dhibaato guud oo ah qalabka Android. Si gab shay ka nidaamka xawaaladaha aad u baahan tahay in uncheck codsiga liiska barnaamijka xawaaladaha. Wixii waxyaabaha kale ee aan lahayn bilowdo nidaamka boot, waxaad isticmaali kartaa Customize in lagu daro iyo awood. Tab user wuxuu muujinayaa dhammaan codsiyada user in ay leeyihiin shaqo qeybtii labaad oo aad uncheck karaan iyaga oo dhan si kor loogu qaado xawaaraha nidaamka xawaaladaha.
Qaybta 1. Sida loo hagaajiyo xawaaladaha Speed ​​ah ee Android Qalabka aan App kasta ama Software Qeybta 2: 4 Best Manager Android xawaaladaha Apps Qeybta 3: Sida loo Delete Apps aan loo baahnayn la MobileG Wondershare in ay dardar Phone ah
Qaybta 1. Sida loo hagaajiyo xawaaladaha Speed ​​ah ee Android Qalabka aan App kasta ama Software
Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka in la raaco si loo hagaajiyo on xawaaladaha.
Talaabada 1: Tag Settings-Kaydinta-Gudaha Kaydinta
Talaabada 2: Tab Apps ka dibna waxaad arki doontaa oo dhan barnaamijyadooda ka dibna tab mid ka mid ah
Talaabada 3: Jooji app ee aadan rabin in uu ordo.
Qeybta 2: 4 Best Android xawaaladaha Manager Apps
Waqti badan ayey qaadan doontaa in la joojiyo socda Chine oo dhan gacanta mid mid, si ay jiraan codsiyo si taas kuu sameeyo in badan. Hoos waxaa ku qoran miis iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadooda Tababaraha xawaaladaha sare ee Android.
Autostarts 4.3 / 5 Lacag
Coobbi xawaaladaha 2.0 4.1 / 5 Free
Maareeyaha xawaaladaha Free 3.8 / 5 Free
Tababare Autorun 3.9 / 5 Free
Tababare AutoStarts aad awood u qaataan in ay gacanta ku barnaamijyadooda xawaaladaha aad. App waxay qaadataa waqti arrin si ay u bilaabaan. Waxaa xaqiiqo ah in ay wakhtigaas ku hamineysay in xogta ay u baahan tahay si ay u bixiyaan macluumaadka aad u waa la qaadan. Waxaa hayaa koontarool aad telefoonka iyo kuu ogolaanayaa inaad ogaato oo app waxaa socda on xawaaladaha iyo waxa ku kicin kara ee asalka ah. AutoStarts ka shaqeeya telefoonada kaliya xidid iyo kiniiniyada. Users xidid The gab karaa rabin auto-bilowday Chine oo ay phone dedejiyo. Oo qaadataa xoogaa lacag ah si ay u isticmaalaan app this.
AutoStarts Download ka Google Play Store >>
2. xawaaladaha Coobbi 2.0
Coobbi xawaaladaha 2.0 waa tababare free xawaaladaha u Android. Version ayaa lacag la'aan ah dadka isticmaala u saamaxaaya in ay maareeyaan barnaamijyadooda xawaaladaha. Waxaad arki kartaa oo app waxaa socda marka telefoonka boot iyo waxa kale oo aad iyaga uninstall karaa si loo horumariyo xawaaraha telefoonka. Interface waa mid fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan. Waa hagaag, waxaa laga yaabaa in aad dareentid in barnaamijyadooda qaar ka socda marka boot phone aadan tusin in liiska.
Download xawaaladaha Coobbi 2.0 ka Google Play Store >>
3. xawaaladaha Manager Free
Tababaraha xawaaladaha free waa app kale oo lacag la'aan ah si ay awood iyo gab barnaamijyadooda xawaaladaha. Waxa kale oo aad astaysto app xawaaladaha iyo waxa ay sii kordhineysaa haddii aad rabto in aad app ay u bilaabaan si toos ah markii reboot telefoonka. App wuxuu taageeraa 7 luqadood. Waxaa jira fursado badan oo lagu qaban lahaa tababaraha, oo aad u awood karo, gab, uninstall, app goobidda iyo sidoo kale akhri macluumaad app. Feature ugu wanaagsan ee app waa in la qiyaaso waqtiga xawaaladaha si aad u niyad san kartaa in ay dedejiyaan. Oo weliba uma baahnid in aad ka rujin aad telefoon si ay u isticmaalaan app this.
Download Manager xawaaladaha Free ka Google Play Store >>
Tababaraha Autorun ayaa kaa caawin doona inaad si ay u maareeyaan barnaamijyadooda iyo dilaan hawlaha aan loo baahnayn in la ordaya ee asalka ah. The users pro heli doontaa qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah. Waxaad gab karaa ama dilaan oo dhan barnaamijyadooda aan loo baahnayn ee qeybtii labaad. Interface waa user-friendly iyo fududahay in la isticmaalo. By dilay barnaamijyadooda, ma dedejin kartaa oo kaliya ilaa telefoonka, laakiin sidoo kale uu cimrigaagu ku awood batteriga. Laakiin mararka qaarkood wuxuu ku qasbi karta barnaamijyadooda si ay u joojiyaan marka aad la furo. Iyo qaar ka mid ah ayaa sidoo kale sheegay in hoos u dhigi doonto telefoonka.
Ka Google Download Manager Autorun Play Store >>
Qeybta 3: Sida loo Delete Apps aan loo baahnayn la MobileGo Wondershare in ay dardar Phone ah
Dhammaan maamulayaasha xawaaladaha leeyihiin xal la mid ah, ay ku dhinteen ama gab ah barnaamijyadooda aan loo baahnayn. Oo dadkii oo qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in lagu rakibay barnaamijyadooda badan oo aan loo baahnayn telefoonka, laakiin daaleen iyaga uninstalling mid mid. Wondeshare MobileGo (Win) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) tirtiri doonaa ama uninstall barnaamijyadooda kuwa aad u in badan ka dibna aad telefoonka dedejiyo. Ka sokow, waxa kale oo aad isticmaali kartaa software si download aad Tababaraha xawaaladaha jecel Android ka Google Play, AppBains, iyo in ka badan, iyaga wadaagaan in ay Twitter, Facebook iyo SMS saaxiibo aad, oo iyaga ku biiro card SD.
Raac tallaabooyinka hoose
1. Download iyo rakibi Wondershare MobileGo on your computer.
2. Connect aad telefoon kula cable USB in computer ama isticmaalaya WiFi ah.
3. Tiirka bidix, u tag Apps dooro barnaamijyadooda aad rabto in aad uninstall.
4. Riix uninstall .
Fiiro gaar ah: xiriir WiFi waxaa loo isticmaalaa oo keliya marka la isticmaalayo version daaqadaha.
3.750.600 oo qof ayaa u soo bixi
SMS Android kaabta in Computer
Xiriirada Android kaabta in PC / Cloud
Kaabta & Soo Celinta Android 1 Click
Data kaabta ka Phone Android inay PC
Import Xiriirada in ay Android Phone Si fudud
Faylal ay ka dhaqaaq Android inay iPhone
Lugood Best u Android Tool Waxaad u
Nuqul Faylal ay ka iPhone in Android
Top 6 ROMS Android Custom: qibrad badan iyo Better on Your Device Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Huawei in Android
Google Chrome Haddaba si fiican u la shaqeeya Windows & Mac
> Resource > Android > Best 4 Manager Android xawaaladaha: Sida loo sameeyo Android xawaaladaha si dhakhso ah